Akụkọ - Gini bu ihe eji emebi emebi
Nkọwa nke bioplastics: ọ bụrụ na plastik sitere na bio, a kọwara ha dị ka bioplastics, biodegradable, ma ọ bụ ha abụọ. Bio base na-ezo aka na ngwaahịa ahụ (akụkụ) sitere na biomass (osisi). Bioplastics sitere na ọka, okpete ma ọ bụ cellulose. Biodegradation nke bioplastics dabere na usoro kemịkal ya. Dịka ọmụmaatụ, 100% bio based, bioplastics abụghị ihe na-emebi emebi.
Ihe plastik biodegradable bụ plastik nke ihe ndị dị ndụ, nke na-abụkarị ụmụ nje, nwere ike ire ere n'ime mmiri, carbon dioxide na biomass.
Ọ bụ ezie na okwu "bioplastic" na "biodegradable plastic" yiri, ha abụghị otu. Ọ bụghị bioplastics niile nwere ike ire ere.
Biodegradation bụ usoro kemịkalụ nke microorganisms dị na gburugburu na-agbanwe ihe n'ime ihe okike dịka mmiri, carbon dioxide na compost (na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye). Usoro nbibi biodgradation dabere na gburugburu ebe obibi (dịka ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ), ihe na ngwa.
Nhazi nke bioplastics
Mmepe nke bioplastics taa
Enwere ike ikewa ndị polymer nwere ike imeghari na polymer starch, polylactic acid (PLA) PHB polyhydroxyalkanoates (PHA) cellulose polymers.
Mbuputa bioplastics zuru ụwa ọnụ ga-abụ 2.11 nde tọn na 2019 na 2.43 nde tọn na 2024, nke a na-atụ anya ịbawanye ntakịrị. E jiri ya tụnyere mmepụta zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị 359 nde kwa afọ / ton nke plastik, ọ ka na-enweta obere ọnụọgụ. Ihe nkedo plastik yiri nke a (nke siri ike ma na-agbanwe agbanwe) na-achịkwa ikike mmepụta bioplastics zuru ụwa ọnụ, yana ihe karịrị ọkara (53%) na ahịa bioplastics dum n'afọ gara aga.
Ebumnuche dị n'azụ polymers bụ iji dochie carbon na ihe ọkụkụ na gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe (sugar na osisi), na okwu ndị ọzọ, iji mepụta polymer sitere na akụ ndị nwere ume ọhụrụ, na iji ngwa ngwa mebie nkwakọ ngwaahịa ma laghachi na okike.
Anyị na ngwaahịa niile bụ 100% ere ure, nke bụ EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, mma.
Akpa mkpofu Compostable, Kechie Biodgradable Cling Kechie, Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere, Akpa Compostable, Eco Cling Kechie Sugar Kechie, Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere,